वसन्त carतुमा कार द्वारा हेर्नका लागि उत्तम स्पेनिश शहरहरू यात्रा समाचार
यात्रा समाचार | 30/04/2021 11:06 | पर्यटन गन्तव्यहरू
चिसो बिस्तारै हराउँदै छ र यसमा एकको तापक्रम तापक्रम बढ्दै छ भन्ने तथ्यको फाइदा लिनुहोस् स्पेनमा best वटा उत्तम शहरहरू रमाइलो छुट्टी खर्च गर्नका लागि यस वसन्तमा।
र ... हाम्रो गाडी संग यात्रा भन्दा राम्रो के हो? हामी समावेश गर्दछौं छाना बार हाम्रो गाडी र साहसिक गर्न! के तपाइँ यस मौसमको लागि शीर्ष शहरहरू पत्ता लगाउन तयार हुनुहुन्छ? पढिरहनुहोस्!
3 Alicante, बेनिडर्म
5 कर्डोबा र मेमा आँगनहरू
हो, पक्कै पनि। म्याड्रिड एक आकर्षक शहर हो। यो जाडोमा धेरै चिसो हुन सक्छ यदि तपाईं न्यानो शहरबाट आएका हुनुहुन्छ, र यदि तपाईं चिसो शहरबाट आउनुभयो भने यो गर्मीमा धेरै तातो हुन सक्छ। जे होस्, यो पुनर्जन्म हो र वसन्तमा फूलिन्छ। सूर्य, पहिले नै न्यानो, निम्तो दिन्छ यसको मनमोहक सडक र पात पार्कहरूमा चुपचाप टहल.
वसन्तमा, तपाईं यस मार्फत हिंड्न सक्नुहुन्छ राम्रो सेवानिवृत्ति पार्क (तालमा एउटा डु rent्गा भाँडामा लिनुहोस्), पार्की जुआन कार्लोस I वा म्याड्रिड रियो मार्फत बाइक सवारी लिनुहोस्। र यदि तपाईंलाई हिंड्न मन परेन भने, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं राम्रो पर्यटन बसमा शहरको यात्रा बुक गर्नुहोस् राम्रो मौसमको फाइदा लिन वा तपाईंको कारमा मार्ग अनुसरण गर्नुहोस्ः सब भन्दा किफायती र आरामदायक विकल्प!
र किन छैन केबल कारमा चढ्नुहोस् र माथिबाट स्पेनिश राजधानीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, जब तपाईं ग्रीष्म sunतुको सूर्यको पहिलो किरणहरूमा नुहाउनुहुन्छ?
यदि यो बाहिर तातो छैन भने, तपाईं जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ रोयल प्यालेस र अल्मुडेना क्याथेड्रल भ्रमण गर्नुहोस्।
स्पेनिश भूगोलको विविधताले निर्णय गर्न गाह्रो बनाउँदछ कुन उत्तम गन्तव्य हो।
यद्यपि हामी छनौट गर्दछौं pyrenees किनभने वसन्त inतुमा अझै पनि माथिल्लो चुचुराहरूमा हिउँ रहन्छ, उपत्यकामा हरियो कुरकुरा छ र चारै तिरबाट पानी बग्छ, नदीहरूलाई जोसका साथ बगिन दिन्छ। कुनै पनि प्रकारको फिल्टर आवश्यक छैन किनकि जमिनहरू वन्य फूलहरू सहित जलाइन्छ, सूर्य देखा पर्छ र आकाश साँच्चै निलो छ। दिनहरू लामो हुन्छन्, र सबै चीजहरू सँगै आउँदछन् रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्न।
हामीले पनि रमाइलो गर्यौं ढु stone्गाको घर भएका साना गाउँहरू, यसको टाईलमा स्लेट र विन्डोजमा फ्लावरपट्स, साथै धेरै वक्र र साना यातायातको साथ सडकहरू।
बेनिडर्म भ्रमण गर्न वसन्त उत्तम समय हो। यद्यपि धेरैले दावी गर्छन् अन्यथा, सत्य त्यो हो यो सूर्य र समुद्र तट भन्दा बढी छ।
बेनिडोरमसँग धेरै नै पेडस्ट्रियाना भएको पुरानो शहर छ र त्यहाँ धेरै बारहरू छन् तिनीहरू स्पेन भर देखि तपसको सेवा गर्दछन् र टेरेसहरूमा ठूलो वातावरणको साथ। तपस क्षेत्रको अतिरिक्त, बेनिडोरममा विभिन्न प्रकारका रेस्टुरेन्टहरू छन् जुन सेवा प्रदान गर्दछ अन्तर्राष्ट्रिय भान्छा संसारको हरेक कुनामाबाट।
तपाईं मिरादोर डे बेनिडर्ममा पनि जान सक्नुहुन्छ जुन शहरको प्रतीक हो र दुई समुद्री तटहरूलाई जोड्दछ। यस दृष्टिकोणबाट तपाईं सूर्यास्त र सूर्योदय को एक प्रभावशाली दृश्य आनन्द लिन सक्नुहुन्छ.
भ्यालेन्सियाले हामीलाई घमाइलो मौसम, टेरेसहरू भर्न पर्खिरहेको स्वागत गर्दछ र स्पेनले दिन सक्ने उत्तम प्यालाहरू बाहिरी टेबुलहरूमा ताजा तयार पार्दछ। गर्मीमा जस्तो धेरै मानिसहरू हुने छैन, त्यस्तै हामीसँग समुद्री किनार हामी आफैंमा पुग्छौं किनारमा हिँड्न र सायद एउटा आइसक्रिम खानु.
हामी जान सक्दछौं कला को शहर, शहर वरिपरि हिंड्नुहोस्, जानुहोस् बनस्पति बगैचा… र अधिक!
कर्डोबा र मेमा आँगनहरू
कर्डोबा मेमा स्पेनको अवश्य अवलोकन गर्नुपर्ने गन्तव्य हो, यसको मे क्रस र पाटियोस, ढोका र खैरो सुन्तलाको रूखहरूको साथ। बर्षको कुनै पनि अन्य महिनाको तुलनामा, शहर प्रकाश र रंगमा नुहाएको छ। थप रूपमा, यस महिनाको अवधिमा लोकप्रिय मेस्टिक प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ, र धेरै निजी घरहरूले आफ्ना आँगनहरू जनताका लागि खुला गर्दछन्, फूलहरू, विवरणहरू र पारित सबैलाई सावधानीपूर्वक ध्यान दिएर।
विश्व प्रसिद्ध मस्जिद-क्याथेड्रल तपाईंलाई चुपचाप छोड्नेछ, र यहूदी क्वार्टर मा टहल्न, Taverns मा तपो स्वाद र शहर को केही लुकेका रत्नहरू, जस्तै भियाना प्यालेस र अल्काजार बगैंचा, यो वास्तविक आनन्द हो। शताब्दीयौंको इतिहास र विविध सांस्कृतिक मिश्रणको साथ राखिएको एउटा शहर जुन निराश हुनेछैन।
sevilla यो बर्षको यस समयमा गजबको गन्तव्य हो अप्रिल फेयरको लागि, जुन वसन्त सम्म चलिरहने Andalusian मेला मध्ये एक हो। धेरै पर्यटकहरू यसको सडकमा सजावटको फूलहरूको लागि वसन्त भग्नको लागि अन्डालुसी राजधानी रोज्छन् यसको मान्छे को रमाईलो वातावरण र क्षेत्र को सुन्दरता।
भ्रमण गर्न सेभिलमा फ्लेमेन्को कार्यक्रमहरू यो स्मारकहरूको माध्यमबाट हिंड्नु, घोडा तान्ने गाडीमा सवारी गर्नु र स्थानीय ग्यास्ट्रोनोमी चाख्नुको साथ एक आवश्यक गतिविधि हो। केही दिनहरूमा तपाईले त्यहाँका सबै चीजहरू थाहा पाउनुहुनेछ जुन शहरको बारेमा जान्नुपर्दछ। वसन्त Seतुमा सेभिलको एक सप्ताहन्तको यात्राले शहरको साथ तपाईंलाई प्रेममा पार्छ र वर्षको कुनै पनि समयमा तपाईं फर्कन चाहानुहुन्छ।
अब तपाईंलाई थाहा छ कुन स्पेनी शहरहरूमा तपाईंले भ्रमण गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो सडक यात्रा? याद गर्नुहोस् कि तपाइँले कोभिड १ state को आपतकालिन राज्य द्वारा लगाईएको नियमहरू अनुकूल बनाउनु पर्छ। प्रत्येक समुदायको नियमहरूको बारेमा खोज्नुहोस् र यात्रामा रमाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » पर्यटन गन्तव्यहरू » वसन्त carतुमा कार द्वारा हेर्नका लागि उत्तम स्पेनिश शहरहरू